talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: June 2012
Posted by talwinsuccess at 2:15 PM0comments
Mommy Carlos နှင့်အတူအမှတ်တရ
Posted by talwinsuccess at 2:09 PM0comments
Clone DVD 4.1.0.23
အသုံးပြုပုံကတော့ DVD9 (8.5) ကနေ DVD5 (4.7) ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲပါ။ တချို့DVD9 ခွေတွေဆိုရင်ကူးလို့မရအောင် ကာထားတာရှိပါတယ်။ ဒါဆို ဒီကောင်လေးနဲ့ ကိုင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမအဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ Clone ချင်တဲ့ခွေ DVD9 (8.5) ကို Drive ထဲထည့်လိုက်မယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ကိုယ် Clone ထုတ်ချင်တဲ့ DVD5 (4.7) ဆိုက်ဒ်ကိုရွေးပါမယ်။ တတိယအဆင့်အနေနဲ့ Split disc လို့ရွေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Start ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ ကျန်တာသူ့ဘာသာသူ လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ 100% ပြည့်တဲ့အထိ စောင့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ တကယ်တမ်းတော့ သူလုပ်ပေးနိုင်တာ ဒီထက်ပိုများပါတယ်။ ကျွန်တော် နာလည်သလောက်ဘဲရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 12:52 AM0comments
1 MOBILE CORNER
Android ဖုန်းအတွက် Mone Tine Keyboard
မှတ်သားလေ့လာ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ
The Best English4You - Learn To Speak English Online
Myanmar Kyat Currency Converter
Myanmar Kyat Exchange Rates
Auto cad sites
Handbrake 1.1.1 64-bit
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် - Facebook 176.0.0.42.87 APK
Dr IT နည်းပညာဖြန့် ဝေခြင်း
Download Latest Avast 2016 Crack 2050 အထိ Free
လူဆိုးဓါးပြတောင် ယုံကြည်ရင် အကျိုးပေးတဲ့ ဂါထာ
SAMSUNG (KOREA) HANDSET များမှာ အင်တာနက်ပိတ်လိုက်သော်လည်း ပိုက်ဆံဖြတ်နေတာကို ဖြေရှင်းရန်
Android Multipurpose Toolkit version 1.0
GRAPHIC DESIGN STUDY
G-Talk ကို Always Idle လုပ်ချင်နေသူများအတွက် ....
Myanmar IT Men's Facebook Wall
နည်းပညာ နှင်. မှတ်တမ်း
သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ......။ My designs may be better than the reflection of my image.(Nagar)
2012 at 3:07am (1)
Posted by Khant Ko Aung on March6(1)
Copyright (c) 2011 talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ....... Designed by Blogger templates